Ny fototry ny fanambadiana kristianina - Ambatonakanga - FJKM Tranovato Ambatonakanga
11 février 2020 1 mars 2020
Araka ny fandaminana avy amin’ny Foibe FJKM, dia nanomboka tamin’ny alatsinainy 10 febroary 2020, tao amin’ny FJKM Analakely ny HERINANDRON’NY FANORENANA SY NY FANAVAOZAM-PITIAVANA. Ny Mpitandrina avy eto amin’ny FJKM Tranovato Ambatonakanga no nisantatra izany tamin’ny fampianarana mahakasika ny fahariana ny olombelona sy ny fahariana ny fanambadiana.
Araka ny bokin’ny Genesisy
Efa tao anaty programan’Andriamanitra ny fanambadiana (Gen 1:27): teo no nahaterahan’ny singany roa, dia ny LAHY sy ny VAVY. Ka ny fiombonan’ireo singa roa ireo no hanehoana ny endrik’Andriamanitra.
Tao amin’ny Gen 2: 7ss no nitanterana ny namoronan’Andriamanitra ny vady sahaza ho an-dralehilahy. Tsy namorona olona vaovao hafa Izy, fa tamin’ny taolan-tehezan’i Adama no nangalana azy.
Araka ny epistily ho an’ny Efesiana (Efe 5:20-33)
Ny fototra iorenan’ny fanambadiana kristiana dia miorina ao amin’ny firaisan’i Kristy sy ny Fiangonana. Noho izany, dia tsy misy ny fanambadiana kristiana ivelan’ny Fiangonana, satria i Kristy sy ny Fiangonana no miara-manamasina ny fanambadiana.
Ireto avy ny tsaok’hevitra avy amin’ireo andinin-tSoratra Masina voatanisa teo:
Tao anatin’ny tantaran’ny fahariana dia efa misy ny tantaran’ny faharian’ny fanambadiana
Andriamanitra no nahary no olona ho amin’ny fanambadiana
Avy amin’Andriamanitra ny fanambadiana.
Ny fanambadiana dia nampidirin’ireo teolojiana ao anatin’ny hoe Ordo creationis, na Ordre de la création divine.
Noho izany, ny fototra iorenan’ny fanambadiana amin’ny fiangonana dia azo fintinina amin’ireto hevitra manaraka ireto:
Fototra iombonana ny fanambadiana (na fondement archaïque du mariage): Izay olona mampiditra an’Andriamanitra ao amin’ny fiainam-panambadiany sy mametraka ny fanambadiany ao amin’Andriamanitra ihany no ho vontom-pitia.
Fototra ao amin’I Kristy (na fondement christologique): Ny fanambadiana nohamasinina, na ny fanambadiana kristiana dia miorina ao amin’ny firaisan’I Kristy sy ny Fiangonana. Tahaka ny nitiavan’I Kristy ny fiangonana no itiavan’ny mpino ny vadiny.
Fifanakalozana sy kilalao no niaraha-natao nony vita ny fampianarana.